मुलुकमा लकडाउन लागु गरेर कोरोना भाइरसको समस्या समाधान हुन्छ र ? « Pariwartan Khabar
मुलुकमा लकडाउन लागु गरेर कोरोना भाइरसको समस्या समाधान हुन्छ र ?
17 August, 2020 1:36 pm
काठमाडौं । मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण नभए निषेधाज्ञा र लकडाउन कहिले सम्म ? कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न पटक पटकको निषेधाज्ञा र लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सक्छ ? भोकमरी लाग्यो भने जिम्मेवार को ?
निषेधाज्ञा र लकडाउन दुई र तीन हप्ता बढाएर कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ र ? निषेधाज्ञा र लकडाउन लागु हुन जेल सम्म कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण होला । तर खुलेपछि कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन्न ? फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्ने ? कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण पाँच वर्षको समयमा पनि नहोला ? मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्नलाई मुलुकलाई लकडाउन र निषेधाज्ञा कहिले सम्म जारी गरी राख्ने ? निषेधाज्ञा र लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्न सक्छ ? मेरो विचारमा कोरोना भाइरस संक्रमण एक वर्षमा पनि नियन्त्रण हुन सक्दैन ।
रुघाखोकी पनि एक प्रकारको संक्रमण र सरुवा रोग भए जस्तै कोरोना भाइरस हो । कोरोना भाइरस संक्रमणलाई छेकेर छेकिन्न घरमा बसे पनि लाग्छ । निषेधाज्ञा गरेर मुलुकले आर्थिक अवस्था थेग्न सक्छ की सक्दैन त्यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ । प्राकृतिक प्रकोप र महामारी संग कसैको केही लाग्दैन । कोरोना भाइरस संक्रमण बाट बच्न अनिवार्य रूपमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग भने गर्नुपर्छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीमा मृत्युको आकडा आउने बित्तिकै नागरिकहरु ओहो यति धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो भनेर आत्तिन थाल्छन आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन । कोरोना भाइरसको महामारी नआउँदा पनि कालगतिले दिनहुुँ मानिसहरूको मृत्यु कयौं गुणा हुन्थ्यो तर हामीले यति जनाको मृत्यु भयो भनेर थाहा पाउने गरेका थिएनौं अहिले मृत्यु हुनेको संख्या थाहा पाइरहेका छौं फरक यति मात्र छ ।
निषेधाज्ञा भन्ने बित्तिकै महंगी बढाइएको छ । मुलुकमा भोकमरी लाग्यो भने जिम्मेवार को को ? मुलुकको अवस्था सिरिया, हाइटी र अफगानिस्तान आदि आदि जस्तो भयो भने जिम्मेवार को ? कयौं अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि नागरिकहरुलाई भत्ता दिएको छ ।
नागरिकहरुका लागि सरकारले नयाँ नयाँ योजना लागु गरेको छ । हाम्रो मुलुकमा लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र लागु छ ? कुनै पनि रोग साधारण हुँदैन जटिल नै हुन्छ । इम्युनिटी पावर कम भएपछि जुनसुकै रोग लागे पनि रोगले हेप्दै जान्छ यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।